२३ पुष २०७७, बिहीबार ११:२६ प्रकाशित
सधैको झमेला र गुटको स्थिति थियो। गएका तीन वर्ष पार्टीले देश अघि बढाउन महत्वपूर्ण काम गर्नु पर्दथ्यो तर त्यो भएन। कार्यकर्तालाई अलमलमा राखियो। असंगठनमा राखियो। बलिदान गरेका कार्यकर्ता आज समाजको पछौटेपन हटाएर समाजलाई सचेत बनाएर संगठित नभएर शिथिलतामा पुगेका छन्। समस्या कहाँ रहेछ र खिया कहाँ लागेको छरु दुई वटा नटबोल्ट फेर्दा कहाँ पुग्यो। खिला लागेका नटबोल्ट आफैँ फुक्लेका हुन्!
पेरिसडाँडामा अहिले पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। यति गते यहाँ जाने, वहाँ जाने भनेका छन्। सिसीमा औषधि जम्मा गर्नेले पनि अलीअली मान्छे जम्मा गर्छ। टाउँको दुखेको, पेट दुखेको औषधि भनेर अब रत्नपार्कमा जम्मा गर्ने वहाँहरूको हालत हो। वहाँहरुको एजेन्डा देश होइन। संविधानको रक्षा होइन। यो सब भन्ने कुरा हो!
यो वर्ष कोभिडले दुख दियो। विकासका काम गतिका साथ काम गरेको अवस्थाका कोभिडले अलि धक्का दिएको छ। यसै वर्ष यसलाई नियन्त्रण गरेर अघि बढ्छौँ। कम्बोडियाले प्लेन चार्टर गरेर सहयोग गर्दैछ। हामीले मागेका छैनौँ। आफैँ दिदैछन्। चीन र भारतसँग सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएको छ। तीन दिनअघि उर्जासचिवको नेतृत्वमा भारतमा गएर शारदा ब्यारेज र नहर चलेको ९२ वर्षदेखि पानी पाएको थिएन। महाकाली सन्धिमा चाँदनी(दोधारालाई पानी दिने सहमति भएको छ। कुनै सरकारले यो पानी चाहियो भनेर भन्न सकेको थिएन। अब ६ महिनाभित्र चाँदनी दोधाराले पानी पाउने छ।
रक्सौलबाट, केरुङबाट काठमाडौँमा रेल ल्याउन काम सुरु भएको छ। सुरुङ खन्न थालिएको छ। अब थानकोटमा सुरुङ हेर्न सकिन्छ। सुनकोशी डाइभर्सन अघि बढ्छ। हुलाकी राजमार्गको चर्चा धेरैले गरे, तर बनाउन हामी नै चाहियो।
अरुका समयमा तराई डुबानमा पर्‍यो तर हामीले वार्ता गरेर नदीको प्रवाह अवरुद्ध हुन दिएनौँ। बाँध खोल्यौँ। देशभर चार लेनका सडक बन्दैछन्। सरकारले सिन्चो भाँचेन भनेर उफ्रने नेताहरुले यो बाटो हेर्दा हुन्छ। पूर्व(पश्चिम राजमार्ग चौडा हुँदै छ। मदन भण्डारी राजमार्ग बन्दैछ। ७ लाख घरहरु बनाएर पीडित जनताहरुलाई दिएका छौँ। तराईमा आँधीहुरी जाने स्थानमा ८६९ पक्की घर बनाएर केही महिनाभित्र सरकारले जनतालाई हस्तान्तरण गरेको छ।
यो मान्छे ९आफू०ले नेतृत्व गरे देश सर्लक्कै विकास हुन्छ भनेर अस्तव्यवस्तता गरेर केही नेताहरू मुख छोडेर हिड्न थालेका छन्। मैले धेरै वर्ष अघि भनेको थिएँ, ुगोरु नाङ्गै देख्दा लाज लाग्दैनु। अहिले सडकमा देखिएको नाराले देख्नेहरुलाई लाज भएको छ। देश अगाडि बढेको छ, बढ्छ र बढाइने छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मैले नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लोकतन्त्र, संविधान र स्थिरता र स्थायित्व खतरामा परेपछि गरेको हो। प्रायोजित रूपमा समाचार छाप्ने, पुनर्स्थापना भयो भने फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हुन्छ ररु अलि दिन कार्यकर्ता झुक्याउनु होला। तर पुनर्स्थापना हुँदैन।
निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी थालेको छ। जनता ताजा जनादेशका लागि स्वच्छ व्यक्तिलाई मत दिन तयार छ। सशक्त बनाउने गरी मतदान गर्न जनता तयार छन्। उहाँहरुले प्रत्यक्षमा १६५ सिट आउँछ भन्नु भएको छ। धेरै नभनौँ ठिक्क मात्र भन्छु, कमसेकम २ वटा अंकको सिट ल्याएर देखाउनुस्रु वहाँ यो अवस्थामा पुग्नुहुन्न, फर्किनुहुन्छ। हामीले ठाउँ राखेका छौँ। अब फर्किएर फेरि उपद्रो मच्चाउन पाइँदैन। अब थान्कोमा राखिन्छ। अब गुटबन्दीलाई बिदा गरेका छौँ। अब गुटबन्दी फर्कन दिइँदैन।
हामीले देश अप्ठ्यारोमा पर्‍यो अनि दलभित्रबाटै कसैलाई थाहा नभई हस्ताक्षर बाकेर कहिले राष्ट्रपति, कहिले कता, कहिले कता पुगेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर सही गराउने अनि पेस गर्न चै अविश्वासको प्रस्ताव र विशेष अधिवेशनका लागि भनेर पेस गर्नुभयो यो झुटो हो। उहाँहरूतिर बहुमत छ भन्नु भएको छ। बैसाख १७ र २७ गते हेरौँ न। हाम्रा युवाहरुलाई यो देशमा अझै बाँच्नु छ। गतल प्रचार र उद्देश्यमा जान दिनु हुँदैन। युवाहरू देशलाई जोगाउने कुरामा सही विचार बोकेर जानुपर्छ। तीन वर्ष पार्टीको पक्षमा बोल्नु भयो। अनुशासनहीन थियो। प्रतिगमनतर्फ तयारी उनीहरूले गरिहरनु भएको थियो। हामीले यसलाई रोक्नु थियो। त्यसैले यो कदम चालेका हौँ। दुई तिहाई भएको पार्टी फुटाउने अनि पुतली सरकार बनाउने उहाँहरुको योजना थियो। सधैँ अस्थिरताको खेलमा देशलाई फसाउने, विकासलाई अवरोध गर्न मनाशाय उहाँहरुको थियो।
देशलाई माया गर्ने, अरुबाट सञ्चालित नहुने सरकार चाहिएकोले विघटन गरिएको हो। सरकारले निर्णयका लागि पेस गरेका प्रस्ताव पेस हुँदैन। तर सभामुखले त्यसलाई पेस गर्दैन। ३ वर्षदेखि पेस गरेको विधेयक समितिमा लगेर अल्झाएको छ, अल्झाएको छ। यसको कारण सरकारलाई असफल गराउने नीति थियो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न परेको हो। पुनर्स्थापना हुन्छ कि भनेर कतिपयले आशंका गर्नु भएको छ। झन्डै ६४ प्रतिशतको दलको नेताले ताजा जनादेश चाहिन्छ भनेर चलाउन्न भनेपछि कहाँ पठाउने फेरिरु
घरवाला भन्दैछ छानो नयाँ बनाउछु, तर छिमेकी पुरानै छानो हुनुपर्छ भन्छन्। कुहिएको छानोले नभएर नयाँ बन्दैछ। पुरानै खरको टुक्रा खोज्न जाने कुरा संविधानमा उल्लेख छैन भनेको छु। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने भनेको छ। संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट नै लेखेको छ। संविधानअनुसार पहिला गठबन्धन र पछि एकल सरकार बनेको हो। बहुमतको सरकारले म चलाउन सक्दिनँ भन्यो भने विघटन गर्न सक्छ। बाँकी अवधि खेर फाल्न हुँदैन भनेर यो विघटन गरिएको हो।
काम गर्न नपाउने अवस्थामा विघटन गरिएको हो। यो फर्कने अवस्था छैन। मुद्दा लड्न पाइयो। मुद्दा लड्ने एउटा कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको सिफारिस गरेको हुँ। केही महिनाअघि बोरिस जोनसनले संसद् विघटन गरेर २१ सांसदलाई निम्लबन गरी दुई तिहाई ल्याएका थिए। इजरायलमा पनि यही भएको छ। संसदीय अभ्यास भएका देशमा यो अभ्यास भएको छ।
२३ पुष २०७७, बिहीबार ११:२६ मा प्रकाशित